Dil,xarig iyo handadaad ayaa loo geystaa Weriyeyaasha ka howlgala Soomaaliya.
Monday July 05, 2010 - 04:33:34 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Inkastoo saxaafad madax banaan oo xor ah ay ka hanaqaaday dalka baaba’san ee Soomaaliya,hadana Marxalada adag ayey ku shaqeeyaan weriyeyaasha Soomaalida ee ku sugan gudaha dalka,sidaas oo ay tahay ma jirto weriyeyaasha dhexdooda isku xirnaan oo waa kuwa ay kala jiidaneyso dabeysha siyaasadaha qalifsan ee ka jira dalka.
waa run oo si isku mid ah ayey u danqadaan marka dil loo geysto qof ay isku mehnad yihiin,laakin waxaa intaa dhaafsiisan ma jiraan, sida caadiyan jirta waa dad sii kala jeeda oo aan laheyn rayi mideysan,waxaaney taasi keentaa in si bareer ah loogu geysto xadgudubyo ka dhan ah xuquuqul insaanka.
Soomaaliya waa meel lagu dhibaateeyo weriyeyaasha islamarkaana ,aan laga qadarin soo bandhigida xoriyada hadalka.
Wixii ka dambeeyey sanadii 2000,waxaa soo badanaayey tacadiyada loo geysto weriyeyaasha madaxa banana ee ka howlgala Somaliya,gaar ahaan kuwa ku dhaqan Magaalada caasimada ah ee Muqdisho..
26,January,2000 weriye ka tirsan Codka shacabka oo lagu magacaabo Axmed Kaafi Awale ayey kooxo burcad ah oo hubeysan ku dileen suuqa bakaaraha xilli uu gudanaayey howlahiisa shaqo
21kii Febrauyo 2001,waxaa magaalada Boosaso lagu xeray weriye Abdi shakuur Yusuf oo ka tirsanaa wargeyska Ogaal ee todobaadlaha ahaa,waxaana la siidaayey 01-april ee isla sanadkaas.
27.Augost 2001,isla magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland waxaa lagu xeray Bile Max’ed Qabowsade iyo Max’ed Said oo ka kala tirsanaa wargeysyada Soyal iyo Yool,kadib markii lagu eedeyey iney daabaceen warbixino wax u dhimayo amaanka.
17 January,2003 kooxo hubeysan oo ka amarqaata Ganacsade Maxamed Deylaaf ayaa albaabada u laabay Idaacada iyo Tvga Horn Afrik.
June,2003,C/raxmaan Xudeyfi iyo Xuseen Geedi Xeynuuf oo ka tirsanaa weriyeyaasha Radio Banadir ayey xabsiga dhigtay dowladii Carte ee Cabdi qasim madaxda ka ahaa.
9 Febraury 2005,waxaa banaanka hore ee Hotelka Saxafi ee Magaalada Muqdisho lagu toogtay Kate Peyton oo barnaamij soo saare ka aheyd BBC-da
In May, 2005,Nin hubeysan ayaa dhaawac u geystay weriye Cabdalla Nuuradiin Axmed oo ka tirsan Idaacada Horn Afrik ee Magaalada Muqdisho
5 June 2005,waxaa kontoroolka laga galo degmada Afgooye ee G/SH/Hoose nin hubeysan uu toogasho ku dilay Weriye Duniyo Muxudiin Nuur oo ka howlgali jirtay Shirkada warbaahinta Horn Afrik,gaar ahaan Idaacada Capital Voice,barnaamijka Muqdisho iyo Maanta.
3 Agosto 2005, Maamulkii degmada Jowhar ee G/Sh/Dhexe ayaa xabsiga dhigay weriye Cabdullaahi Kulmiye Caddow oo idaacada Horn Afrik ka tirsan.
23 june,2006,Waxaaa fagaaraha Tarbuunka ee Magaalada Muqdisho lagu dilay weriye filimqaade ahaa oo Swedish ah Martin Adler oo ahaa weriye Madaxbanaan.
24 Octobar,2006 waxaa dowlada Federalka Kumeel Gaarka ay xirtay weriyeyaasha kala ah,fahad Maxamed Abukar oo ka shaqeynayey idaacada warsan,Maxamed Cadaawe,Shabeele Radio iyo Muqtaar Maxamed Catoosh weriyaha Horn Afrik ee gobolada Bay iyo Bakool.
24 November 2006 Cabdullaahi Yaasiin Jaamac oo ka shaqeynayey Radio Warsan oo dowlada Federalka ay ku xirtay Magaalada Baydhaba.
2 Janaury 2007,weriyeyaal ka tirsan wargeyska Haatuf ayaa la xiray kadib markii lagu eedeyey iney warbixino isdabajoog ah ka qoreen qoyska Madaxweynaha M/mulka Somaliland Daahir Riyaale Kaahin,waxaana maxkamada Somaliland ay ku xukuntay 2 ilaa 2 ½ sano iyo bar xabsi ah
15,January,2007,dowlada Federalka ayaa xirtay sedex idaacadood oo ka howlgala Magaalada Muqdisho,sida,Horn Afrik,Shabelle iyo IQK.
9 Maarso, 2007 Xasan Sade Dhaqane oo ka tirsanaa Shirkada Warbaahinta HornAfrik xabsiga ay dhigtay Dowlada Federalka Kumeel Gaar ka ah. .
4 April 2007 Agaasimaha tvga Universal xafiiska Muqdisho C/qaadir Maxamed Cashar Nadar,weriye Bashiir Diiriye Naaleeye iyo filmqaade Xaamid Maxamed Cusmaan oo intaba ka tirsan Tvga Universal ayey xirtay DFS,kadib markii uu Afhayeenka Cabdilahi Yusuf,ninka lagu magacaabo Xuub-sireed uu ku eedeyey iney su’aalo qaldan weydiiyeen,kadib markuu ugu yeeray shir jaraa’id oo la sheegay inuu qabanayey,waxaana markii maxkamad la soo taagay kadib cadaatay inaaney wax dambi ah laheyn ,iyagoo xornimadoodii dib ay u helay,22 May sanadkan 2007
21 April 2007 madaafiic dhowr ah oo lagu garaacay idaacada Horn Afrik waxaana halkaasi ku dhaawacmay weriye Yaxye Cali Faarax iyo Filimqaade Cabdi Dhaqane Ciye.
5 May 2007 weriye Maxamed Cabdullaahi Khaliif ayaa toogasho lagu dilay maamul goboleedka Puntland
15 May,2007,Weriye Abshir Cali Gabra iyo Axmed Xasan Mahad oo ka tirsanaa weriyeyaasha Idaacada Jowhar ee G/SH/Dhexe ayaa lagu dilay dagaal ku dhexmaray maleeshiyo beeleedyo tuulada Xaaji Cali ee isla gobolkaasi Shabeelada dhexe, ayagoo u socday iney soo gutaan waajibaadkoodii shaqo.
Waxaa intaasi sii dheer weriyeyaal badan oo jirdil ay DFS ugu geysatay magaalada Muqdisho Ismaaciil Cali Cabdi Taxte, Maxamed Raage oo idaacada shabelle ka tirsan,sidoo kale jirdil magaalada Baydhaba loogu geystay weriye Maryan Qalanjo oo ka tirsaney weriyeyaasha Idaacada Shabelle baydhaba oo ay jirdilka u geysteen ciidamada m/mulka gobolka baydhaba,iyadoo xafiiskii Idaacada Shabelle ee magaalada Baydhabana la xiray.
Sidoo kale waxaa jira handadaadyo dhowr ah oo si isdaba joog ah loogu geysto weriyeyaasha Soomaaliyeed,waxaaney xilligan u muuqataa iney tahay waqtigii ugu xumaa ee soo mara weriyeyaasha Soomaalida .
Waxaa soo ururisay Madaxa Daraasaadka iyo diiwaangelinta ASOJ
Fardowsa Max’ed Cabdulle.